तिथि मेरो पत्रु » एक जवान नारी मा डेटिङ5सजिलो कदम
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: फरवरी. 25 2020 |3मिनेट पढ्न
“म एक साना महिला खोज्दैछु तर सबैभन्दा महिलाहरु आफ्नै उमेर आसपास कसैले मिति गर्न चाहनुहुन्छ. म के गर्न सक्छु?” – बेनामी
आजको प्रश्न अज्ञात रहन इच्छा गर्ने हाम्रो पाठकहरु को एक देखि छ; हामीले उहाँलाई बिल बोलाउछु. फेरि प्रश्न पढ्नुहोस्. कसरी बिल कि त्यो खोज्ने जवान महिला कसैले आफ्नो उमेर मा रुचि छैन पहिले नै विश्वस्त छ नोटिस. यो आत्म पूरा वस्तुतः साँचो आउन प्रत्याभूति छ, जो विश्वास छ. तपाईं तल गहिरो तपाईं असफल जाँदै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास भने, त्यसपछि तपाईं हुनेछ.
छोटकरीमा, हो, तपाईं बिल्कुल तपाईं लागि सही भन्ने एक जवान महिला पाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं केवल आफ्नो लक्ष्य सेट गर्न आवश्यक, कारवाही गर्नु, र पाठ्यक्रम रहन.
सही दिशा तपाईं कसरी शुरू गर्न सक्छन्?
पहिलो, गहिरो तल भित्र एक नजर र तपाईं एक साना महिला भेट्न चाहन्छु ठ्याक्कै किन बाहिर आंकडा. र त्यसपछि यो सिद्ध महिला जस्तै हुनेछ के सोच्न. तपाईँ सम्भावित गर्न सक्छन् रूपमा धेरै विवरण उनको वर्णन. त्यसपछि, कागज को टुक्रा मा लेख्न. उनको उमेर सूची, शारीरिक उपस्थिति, व्यक्तित्व लक्षण, सोख, लाइक र मननपर्ने, आदि. आफ्नो ठूलो विस्तार मा तपाईं को लागि सही महिला वर्णन गरेपछि, कागज को कि टुक्रा अप गुना र को लागि तपाईं संग यो पूरा 1 हप्ता.
तपाईं उनको साथ पहिले नै हुन् भनेर कल्पना. अब तिमि के गर्छाै? तपाईं के कुरा हुनेछ? तपाईं जहाँ जान हुनेछ? साँच्चै यो महसुस र यो को भावना मा प्राप्त — तपाईं उनको छन् जब तपाईं कस्तो महसुस हुनेछ? यो सबै मुर्ख लाग्न सक्छ, तर तपाईं बस तल लेखेर के तपाईं चाहनुहुन्छ थाह, तपाईं यसलाई प्राप्त गर्ने संभावना वृद्धि 80%!
बस एक मिनेट को लागि एक सोच्न…
“तल केहि लिख अनुशासन यसलाई के बनाउने तिर पहिलो कदम हो।”
– ली Iacocca
सामाजिक stigmas र किन ख्याल गर्छन्?
तपाईं छैन. हाम्रो समाज सामाजिक stigmas भरिएको छ. हामी चिन्तित हुनुको त्यसैले व्यस्त हुनुहुन्छ “कुरा अरूलाई लाग्छ हुनेछ” हामी हाम्रो आफ्नै सपना पछि लाग्न डर हुनुहुन्छ. हो, धेरै मानिसहरू अरूलाई न्याय पारित गर्न प्रेम, तर आफ्नो रुचि र आफ्नो सही. किन तिनीहरूले अर्को दिन को लागि एक ठूलो विषय छ के, तर यो साँच्चै महत्त्वपूर्ण यहाँ. अरू कुनै एक संभवतः तपाईं लागि के सही थाह पाउन सक्नुहुन्छ, किन तिनीहरूलाई सुन्न?
बुद्धिमान् व्यक्ति एक पटक भन्नुभयो,
“के अरू कसैले तपाईंलाई बारेमा सोच्छ आफ्नो व्यवसाय हैन छ”.
यो साँचो भन्दा महिला आफ्नै उमेर आसपास कसैले चाहेको छ?
यो पूर्ण सत्य छैन! तथ्य छ, हामी प्रत्येकले फरक र अद्वितीय चाहन्छ र आवश्यकता छ. आफ्नो लक्ष्य र एकल ध्यान तपाईं लागि सिद्ध महिला फेला हुनुपर्छ. अवधि.
5 साना महिला आकर्षित गर्न र डेटिङ लागि सजिलो सुझाव.
साना महिलाहरु अक्सर परिपक्वता जस्ता गुणहरू आकर्षित छन् (आफ्नो बाबाले जस्तै), थप पैसा र उच्च सामाजिक स्थिति, masculinity, नेतृत्व क्षमता, निर्धक्क, र धैर्य, तपाईं ध्यान केन्द्रित गर्न को लागि त यो महत्त्वपूर्ण तपाईं अधिकार यस्ता गुणले को जुन मा.
1) आफैलाई हुनुहोस्.
पुरानो मान्छे एक साना महिला पूरा गर्दा तिनीहरूले अक्सर स्नायु प्राप्त र साँच्चै अनौठो व्यवहार गर्न सुरु. यो छैन — केवल आफु हुनु.
2) यसलाई हल्का र रमाइलो राख्न.
चंचल हुन. मजा. उनको तंग. त्यो के यो जस्तै खेल्न र वरिपरि goof गर्न भूल छैन. यो तपाईं जीवन यति गम्भीरतासाथ लिन छैन याद गर्न केही राम्रो गर्न छौँ. एक सानो पागल हुन र साना मान्छे साधारण गर्न खर्च गर्न सक्दैन भनेर कुराहरू लागि रोज्न. अघि बढ. रमाइलो गर.
3) नेता हुन. मानिस हुन.
साना महिलाहरु सम्भवत कसैले नेतृत्व लिन देख रहे. तिनीहरूले जीवनमा कम अनुभव र बाहिर त्यहाँ के देखाउँछ कसैलाई लागि सबै भन्दा अधिक संभावना देख रहे. आफ्नो मिति र समय अगाडि अन्य योजना बनाउन, तर संवेदनशील हुन र तपाईं पहिले नै गरेका छन् भन्ने योजना उनको राय सोध्न. (त्यो सुशी एलर्जी हुन सक्छ). एक मानिस हुन, अहिलेसम्म उनको राय आदर. ढोका खोल्दै, को curb को बाहिर मा हिड्ने, र बाहिर कुर्सियों खींच साना महिलाहरु मा एक ठूलो छाप बनाउन अर्को तरिका हो.
4) एक जस्तै व्यवहार नगर्नुहोस् “perv”.
सबैभन्दा आकर्षक जवान महिला केही लङ्गडा द्वारा मा मारा गरिएको छ, पतित पुरानो मान्छे. चाँडै मा सार्न प्रयास नगर्नुहोस् वा त्यो तिमी सिर्फ एक हुनुहुन्छ लाग्छ छौँ “perv” उनको प्यान्ट मा प्राप्त गर्न खोज्दै. जब आफ्नो एक्लै सँगै, यो इश्कबाज गर्न ठीक छ, तर उनको थप केहि लागि पछि लाग्न गरौं. अन्यथा तपाईं उसलाई तर्साउन सक्छ.
5) उनको केही ठाउँ दिन.
साना महिलाहरु शायद अझै धेरै संरचित जीवन र शून्य स्वतन्त्रता आफ्नो अभिभावक घरमा को बाहिर मिल्यो. त्यो तपाईं आकर्षित छ भने, यो किनभने तपाईं हुनुहुन्छ त्यो अझै बाँकी छ कि suffocating वातावरण पुन: सिर्जना छैन… तपाईं केहि अलग प्रतिनिधित्व किनभने यो छ. उनको केही ठाउँ दिन. त्यो सधैं बारेमा सपना देख्यो कि मानिस हुन, र त उनको पीछा छैन. उनको तपाईंलाई आओस्.